संसदमा सत्तापक्षका सांसदले उखु किसानका आवाज उठाए, प्रतिपक्षी मौन
उखु किसानले सरकार र उद्योगीबाट तीन अर्ब भुक्तानी नपाएको विषयमा संघीय संसद्मा प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबारको बैठकले किसानलाई पैसा नतिर्ने उद्यमीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समिति बैठकमा पुगेका दुई किसानले अन्नपूर्ण सुगर मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड रुपैयाँ नदिएको
झरीका प्रेमिल गीत
घामको घमाइलो र हिउँ फूलको रमाइलो हामीले अनुभव गरेकै हो। लगातार वर्षापछिको हिलो सडक र क्रूर हावाहुरीको डरले पनि हामीलाई सताएकै छ। जब मौसम बदलिन्छ, मानवीय भावनालाई यसले स्वतः प्रभावित पार्छ। साउनको महिना, मनसुन सक्रिय छ। छिनभरमै आकाश कालो बादलले भरिन्छ। कहिले सिमसिमे पानी त कहिले अविरल वर्षा। आकाशबाट पर्ने पानीसँग मानिसका अनेक भाव जोडिएका
नमस्कार ! आउनुस्, बस्नुस् । म तपाईंलाई नै पर्खिरहेको थिएँ । सामुन्ने बस्नुस् । फेस–टु–फेस बस्दा अति उत्तम ! आँखामा आँखा मिलाएर बात मार्न सकिन्छ । यसो गर्दा हाम्रो बातचितको पनि सम्मान हुन्छ, होइन त ? मुहारमा नहेरी कुरा गर्ने मान्छेहरू मलाई उत्ति साह्रो मन पर्दैन । त्यस्ता मान्छे निकै असभ्य, अविश्वसनीय एवं घृणाका लायक हुन्छन् । कुराकानी गर्दा दोस्रो व्यक्तिको आँखामा बदलिइरहने भाव
नेपाली श्रमिकलाई मलेसिया खुला
सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने नेपाली कामदारलाई पनि मलेसियाकै न्यूनतम पारिश्रमिक लेबी तिर्नुपर्ने प्रणाली हटाइयो, कम्पनीले पासपोर्ट कब्जा गर्न नपाउने कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भए मुद्दा किनारा नलागेसम्म मलेसियामा बस्न पाउने स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट अन्त्य, नोभेम्बरदेखि नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको अडिट १५ महिनादेखि नेपाली कामदारका लागि बन्द मलेसियाको रोजगारी आइतबारदेखि खुल्ने भएको छ । कुनै पनि शुल्क नतिरी
इन्टरनेटमा भाइरल भएकी युवतीका २५ लोभदाग्दा तस्विर
इन्टरनेटमा भाइरल भएकी यी युवती को हुन् भन्ने बिसयमा सबै को मन मा खुल्दुली आउन सक्छ ! पछिल्लो समय बिसेष गरि सामाजिक संजाल फेसबुक टुइटर हरु मा यिनको प्रोफाइल फोटो हरु हामि धेरै नै देख्न सक्छौ । तर यी नेपाली भने होइनन् । अझ यिनको फोटो प्रयोग गरेर अरु नै लेडिज को नाम मा फेसबुक
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले नयाँ सांगठनिक संरचना कार्यन्वयन गरेको छ। दूरसंचार प्राधिकरणले नयाँ संरचनामा यस अघिको महाशाखालाई निर्देशनालयमा र विभागलाई महाशाखामा परिवर्तन गरेको छ। जसमा प्रविधि तथा पूर्वाधार विकास महाशाखालाई प्रविधि तथा पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा परिवर्तन गरेको छ। यो निर्देशनालय अन्तर्गत पूर्वाधार महाशाखा, नियमन महाशाखा, स्तरिकरण महाशाखा राखिएको छ। भने प्रशासन तथा अनुमतिपत्र महाशाखालाई निर्देशनालयमा परिवर्तन गरेको छ।
सस्तोडिल बाट सामान खरिद गर्दा ४० प्रतिशत छुट पाइने
सेल पेले सस्तोडिल सँग मिलेर क्रिसमस र नयाँ वर्षको लागि अफर ल्याएको छ । यस अफर अन्तर्गत सस्तो डिलबाट पहिलो पटक कुनै पनि सामान खरिद गर्दा ४० प्रतिशत छुट लोयल्टी पोइन्टको रुपमा सेल पेको एपमा पाइने छ । जसको लागि सस्तोडिल बाट सामान खरिद गर्दा सेल पे बाट भुक्तानी गर्नु पर्ने छ । यो अफर
क्यान इन्फोटेक २०२० को लागि स्टल बुकिङ खुल्ला
अगामी फागुन २ गते देखि ७ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चल्ने क्यान इन्फोटेक २०२० को लागि प्रायोजक र स्टलको बुकिङ खुल्ला गरिएको छ । अनलाइन स्टल बुकिङको यो वेबसाइट लगइन गर्नुहोस । बुकिङ गर्दा इ बैंकिङको प्रयोग गरेर रकम पठाउन सकिने अथवा बैंकको डिपोजिट भौचर पठाउनु पर्नेछ । अफलाइनबाट पैसा पठाउनको लागि बैंकको डिपोजिट काउन्टरमा गएर
एनसेलले क्रीसमस र नयाँ वर्षको अवसरमा विदेश घुम्न जानेको लागि नयाँ अफर ल्याएको छ । तपाई यात्रामा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ जसको लागि विदेश जादा सिमको आवश्यकता पर्दैन भन्दै एक दिनको लागि अनलिमिटेड डाटा प्याक सार्वजनिक गरेको हो । जसमा एक सय रुपैयाँमा एक दिनको लागि अनलिमिटेड डाटा प्याक प्रयोग गर्न सकिने छ । यो अफर अमेरीका,
सातदोबाटोको नवनिर्मित हिटिङ स्विमिङ पुलमा दुई सय मिटर फ्रिस्टायलमा स्विमिङमा नेपाललाई ऐतिहासिक पहिलो स्वर्णपदक दिलाएकी गौरिका सिंह सञ्चारकर्मीबाट घेरिएकी थिइन् । ३५ वर्ष इतिहास बोकेको दक्षिण एसियाली खेलकुद साग प्रतियोगितामा पहिलो नेपाली खेलाडीका रूपमा गौरिकाले स्विमिङ स्पर्धामा स्वर्ण दिलाउँदा उनको कमेन्ट लिन चाहेका थिए, सञ्चारकर्मीले । इभेन्ट सकिएको आधा घन्टापछि झुल्किएकी गौरिका अचानक मिडियाबाट घेरिँदा केही बोल्न